ဒူဘိုင်းရှိအလုပ်အကိုင် 10x ပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်ရှာဖွေရေးစတင်ပါ
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း, ဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အတှေ့ရ! 🌟🌟🌟🌟🌟
စီမံကိန်းမန်နေဂျာ - Parsons International Limited
ဒီဇင်ဘာလတွင် 31, 1969
သငျသညျဒူဘိုင်းအတွက် Google ကအလုပ်ရှာဖွေရေးရှာဖွေနေပါသလား? 🌟
သြဂုတ်လ 26, 2017
သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း drop နှင့်ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းအလုပ်ရှာတွေ့!
ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ယောဘ, ကအကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တကယ်တော့ဤသည်နေ့ရက်ရဲ့ အင်ဒိုနီးရှားကနေအများဆုံးကျွမ်းကျင်သူများ နှင့် ထိုင်းကျွမ်းကျင်သူများ။ ယူအေအီးအတွက်အသစ်တခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသည်။ သို့သျောလညျး, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီသင့်ရဲ့အားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးဖို့ကဒီမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီပေးအပ် အကောင်းဆုံးကို tools များထဲကတစ်ခု။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများတစ်ခုမှာရန်ဖြစ်ပါသည် ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူကျွမ်းကျင်သူများ connect။ သငျသညျကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါလာသောအခါငါတို့သည်ဒူဘိုင်း၌သင်တို့ကိုနေရာချပါလိမ့်မယ်။ ယခုကြှနျုပျတို့များတွင်အလုပ်အကိုင်အဘို့ကိုစုဆောင်းနေကြသည် ဒူဘိုင်း 2018-2019.
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီအတွက်ယောဘ, တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့ကအိန္ဒိယကူညီပေးနေကြပါသည်နှင့် အတွက်အလုပ်အကိုင်အကိုရှာဖွေ Philipino အလုပ်ရှာဖွေသူများ ဒူဘိုင်းမြို့။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူကျနော်တို့ကူညီနေတာပါ တစ်ခုအံ့သြဖွယ်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီစုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်အလျှောက်လွှာအကူအညီနဲ့ပါဝင်သည်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ကြောင်းနောက်ထပ် key ကိုအမှတ် ပူဇော်သက္ကာကို GCC အတွက်အလုပ်အကိုင်အလွတ် Finder ဖြစ်ပါတယ် အင်ဒီးယန်းအဘို့အနိုင်ငံပေါင်း။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, အလုပ်အမှုဆောင်အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲတွင်ရှာတွေ့ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူစေသည်။ သူတို့အခွအေနမြေိုး, ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီဖြစ်လာ ဒူဘိုင်းအတွက်ဦးဆောင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီ။
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခုကပင်ကူညီ အလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေကျွမ်းကျင်သူများအမျိုးသမီးများကို။ ဒါကြောင့်သင်ကအရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအလုပ်အကိုင်များရှာဖွေနေကြသည်လျှင်။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ကုမ္ပဏီက်ဘ်ဆိုက်မှာကြည့်သင့်ပါတယ်။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းအများအပြားဖန်တီးထားပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်ရှာဖွေနေအလုပ်အကိုင်အဘို့ options များ။ ဒီတော့ဝေးကျနော်တို့အိန္ဒိယနှင့်ပါကစ္စတန်အနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကူညီပေးနေနေကြသည်။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့် ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ။ ဒါ့အပြင်အခြားအအရှေ့အလယ်ပိုင်းနိုင်ငံတွေကနေ။ ကျိန်းသေကျွန်တော်တို့ရဲ့ အသုံးပြု. ကောင်းတစ်ဦးရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် စုဆောင်းမှုန်ဆောင်မှုများ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။
ထို့ပြင်အလွန်အဘို့အကောင်းတစ်ဦးလမ်းလည်းရှိပါတယ် ပညာတတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမှုဆောင်အရာရှိ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူဥပမာအားဖြင့်, ပင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်အလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျ MBA ဘွဲ့ပညာရေးနှင့်အတူ.
ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီ အမြဲနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲအလုပ်သစ်ရှာဖွေသူများကိုစောင့်ဆိုင်း။ ရသောအခါကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှကျနော်တို့ကအမြဲတမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ် ချက်ချင်းအသစ်ကကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာ ယူအေအီး၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ ကုမ္ပဏီ ဦးဆောင်ဆိုရှယ်မီဒီယာစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါသည် အဆိုပါ GCC အတွက်ကုမ္ပဏီစာမျက်နှာ။ ရှင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကအမြဲအရှေ့အလယ်ပိုင်း CV ကိုရဲ့မှတ်ပုံတင်ရရှိရန်စုဆောင်းကုမ္ပဏီများမှကူညီပေးနေသည်။ သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါနှင့်တစ်ဦးကိုရှာဖွေ ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်အလုပ်အကိုင်ယနေ့ချက်ချင်း.
အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာရန် အမ်းမရိတ်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူဖြစ်လာဖို့ဘယ်လို။ အပြုသဘောဘက်ခြမ်းတွင်မကြာခဏကျွန်တော်တို့ရဲ့အပ်လုဒ်ကိုကိုယ်ရေးရာဇဝင်အပိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပူးတွဲစစ်ဆင်ရေးအပေါ်အခြေခံပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်တွင်သင်၏လျှောက်လွှာကိုအသေးစိတျမှတ်ပုံတင်ရန်ကျေးဇူးပြုပြီး အလုပ်အကိုင်အ site ကို in ဒူဘိုင်းမြို့။ 50,000 ကျော် အလုပ်ရှာဖွေသူများပြီးသားကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့အလုပ် Finder program ကိုအသုံးပြုခဲ့ သူတို့ 100% ပျော်ရွှင်အထူးသဖြင့်ယူအေအီး၌ထားရှိပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏တဦးတည်းမကြာသေးမီကစျေးကွက်အပေါ်ထားရှိထားပြီး အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အအိပ်မက်မက်.
တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်, ဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ကယူအေအီး၌ထားနိုင်ပါတယ်။ ဤအချက်ကိုတဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကူညီနေတာပါ ပြည်ပမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကိုရှာဖွေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး။ သငျသညျငှားရမ်းမန်နေဂျာနှင့်အတူချိတ်ဆက် CV ကို upload တင်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂြိုဟ်တွင်, နေသောဤမျှလောက်များစွာသောလူတွေရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းလူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းကိုနေ့စဉ်နေ့တိုင်းအိပ်မက်။ ဒါပေမယ့်အဖြစ်မှန်အတွက်လူတိုင်းမဖွင့်ဖို့ရဲစွမ်းသတ္တိရှိပါတယ်။ ပင်ရိုးရှင်းသောရှာဖွေခြင်း တစ်ဦးမောင်းသူအဖြစ်အလုပ်နေရာလွတ်။ ပြီးတော့ ဒူဘိုင်းမှရွေ့လျား အချိန်ယူပါ။ ထို့အပြင်အားထုတ်မှုနှင့်ပိုက်ဆံတွေအများကြီးကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ တောင်မှအခြားနှင့်စကားပြော အိန္ဒိယသို့မဟုတ်ကူဝိတ်ကနေပြည်ပရှိ။ စီမံခန့်ခွဲဖို့ဒီတစ်ခါလည်းခဲယဉ်းအလုပ်တခုကို။ ဒါပေမယ့်သင်ကအလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျစိတ်မပူပါနဲ့ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူ, သငျသညျရိုးရှင်းစွာ LinkedIn သို့မဟုတ် WhatsApp ကို အသုံးပြု. အလုပ်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သင်တန်း၏, တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပြန်လည်သုံးသပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ် site ကိုစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ သငျသညျမှ လာ. အဘယ်အရပ်၏အလင်း၌ဒါ။ သင်သိသင့် ဒူဘိုင်းမြို့အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည် အိပ်မက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသည်။
ဒူဘိုင်းမြို့အတွင်းအလုပ်အတွက်သင့်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ
မှအများစုမှာဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထား ရှာတွေ့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ် ခံစားချက်တွေကို. ကြောင်းကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Apply နှင့်ဖြည့်ပါ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပေါ်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်လွှာထုတ် အလုပ်ပေါ်တယ်။ ဤအချက်များပေးထား, စတင် အလုပ်လျှောက်ထားဒူဘိုင်းအတွက်ကမ်းလှမ်း စီးတီးသည်ယနေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်မှတ်ချက်ပြုထားသည်အတိုင်းအကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်များအတွက်အကူအညီကမ်းလှမ်း အလုပ်နေရာလွတ် in ဒူဘိုင်းမြို့။ အနှစ်ချုပ်ရနျကြှနျုပျတို့၏အလုပ်ရှာဖွေရေး applications များဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာနေ့စဉ် update လုပ်နေကြသည်။ ယခုကြှနျုပျတို့အကြောင်းကိုအနည်းငယ်ဆောင်းပါးတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနေကြ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဘယ်လိုစတင်သလဲ.
ဤစကားမှန်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်း အလုပ်အကိုင်ရှာဖွေကိရိယာ ပြည်ပမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အရှေ့အလယ်ပိုင်းသိသာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည် ကိုရှာဖွေရာအရပျ ဒူဘိုင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ. နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း Upload လုပ်ပါ ဘို့ သူနာပြု ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ် ကျနော်တို့လုပ် သင်တို့အဘို့စဉ်းစားခပ်သိမ်းသောအရာတို့ကို။ ရေရှည်မှာမှာတော့ဒူဘိုင်းအလုပ်ရှာဖွေရေးရှာတွေ့ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုအေဂျင်စီ အသုံးပြု. ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအဘို့, အလုပ်အကိုင်အခွင့်အ ပြည်ပမှာရှိပါတယ် ရဖို့မလွယ်ကူပါဘူး.
ဒူဘိုင်းတွင်ဂျော့ဘ် - အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု
အကျိုးဆက် 2016 ကတည်းကအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေသူကူညီပေးနေဒူဘိုင်းစီးတီးကုမ္ပဏီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျနော်တို့ Facebook တွင် & LinkedIn ကနေအံ့သြဖွယ်အလုပ်ရှာဖွေသူများရှိခြင်းနေကြသည်။ ရေရှည်, ကျနော်တို့အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေကြပါသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အတှေ့ရရန်နှင့် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစတင်ရန်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အံ့သြဖွယ်လူမှုမီဒီယာစျေးကွက်ရှာဖွေရေးက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ။ နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ, သင်လုပ်နိုင်သည် အသစ်တခုအခွင့်အလမ်းကိုရှာဖွေ ထက်နည်း7နေ့ရက်ကာလ၌။ သို့သျောလညျးသငျသညျကနေအလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုရဖို့ရှာကြသည်လျှင် ထိပ်တန်း GCC အတွက် 100 ကုမ္ပဏီများ။ သငျသညျကောင်းစွာပညာတတ်လျှင်ရိုးရိုးသားသား, သင်တောင်မှလုပ်နိုင် ဒူဘိုင်းမြို့ကနေဟားဗတ်အပေါ်လေ့လာမှု။ အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်အဖြစ်မှန်ဖွင့်လှစ်တံခါးများအတွက်ဒူဘိုင်း။ သူကားအဘယ်သူမှချစ်ကြလိမ့်မည် သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းတိုး ကောင်းစွာ-paid အလုပ်အကိုင်နှင့်အတူ ?.
အဘယ်ကြောင့် ဒူဘိုင်းမြို့တော်တွင်ယောဘသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ?. သူတို့ကြောင့် စူပါအခွင့်အလမ်းများပေးဆောင်!။ အမြဲတမ်းအချိန်နှင့် ASAP သူတို့ကိုရဖို့ကယ့်ကိုထိုက်တန်ပေါ်မှာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သငျသညျမြားကိုလညျးကုမ္ပဏီများမှငှားရမ်းဖို့ကိုကြည့်သင့်ပါတယ်။ ဒူဘိုင်းအတွက် Careerjet နှင့် Monster ပင်လယ်ကွေ့စုဆောင်းမှုက်ဘ်ဆိုက်။ သူတို့ကသင်၏ CV နှင့်အတူလျှောက်ထားရန်ကယ့်ကိုထိုက်တန်ဖြစ်ကြသည်။
ဒူဘိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြည်တော်ပြန်များအတွက်အိပ်မက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာတစ်ခုဖြစ်တယ် ဒူဘိုင်းမှာရှိတဲ့ Burj Al Arab ကမ်ဘာပျေါတှငျအမြားဆုံးဇိမ်ခံဟိုတယ်။ နှင့်အခြားတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ဒူဘိုင်းအတွက် Versace ဟိုတယ်။ ဒီလက်ငင်းမှာ, သငျသညျန်ဆောင်မှုများရှာဖွေနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ရှာဖွေခြင်းနှင့်များအတွက် ဟိုတယ်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, သငျသညျကြှနျုပျတို့၏ website ပေါ်မှာမှတ်ပုံတင်ပြီးဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသူစစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။ ရုတ်တရက်အဘူဒါဘီအားလုံးသည် /ဒူဘိုင်း/ ကာတာနိုင်ငံ / ဘာရိန်း / ကူဝိတ် / အိုမန်အဓိကဦးတည်ရာဖြစ်ပါတယ်။ အဘို့ အလုပ်လုပ်ချင်ပါတယ်တဲ့သူပြည်တော်ပြန် ဟိုတယ်နှင့်ဧညျ့ကဏ္ဍများတွင်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျနော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကျော်ကူညီပေးနေကြပါသည် အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ WhatsApp ကိုအတွက်ဟိုတယ်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အပို့စ်တင်နေသောအနည်းငယ်ငှားရမ်းမန်နေဂျာရှိပါတယ်။ တူညီသောလက္ခဏာသက်သေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအသုံးပြုမှုအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်နိုင်ငံတကာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုးသည်။ အဖြစ်ရေတွင်းများအဖြစ် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအမှုဆောင်အရာရှိ.
သင်တို့တွင်အလုပ်ရချင်ပါတယ်လျှင်ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှနားထောငျခစျြတင့်နှင့်အတူစတင် ဒူဘိုင်းမြို့။ သင်အမှန်တကယ်ဒူဘိုင်းနှင့် ပတ်သက်. အဘယ်အရာကိုသိလား ?. ရှင်းမှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသေးစိတ်လမ်းညွှန်မှာကြည့်ပါ။ သငျသညျဒူဘိုင်းမြို့တော်ပြောင်းရွှေ့ဖို့လိုအပ်ကဘာလဲ သငျသညျအများအပြား options များထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ သင့်ကိုယ်ပိုင်တိုင်းပြည်ထွက်ခွာခြင်းမပြုမီ။ အဆိုပါဗီဇာဘို့သင့်ကိုမှတျပုံတငျသငျ့သညျအဘယ်မှာရှိ။ အဘယ်မှာရှိနောက်ခံပျံသန်းမှုစာအုပ်ဆိုင်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အသင်းမှာလည်းအကြံပေးချက်များပေး။ ထိုသူတို့ကအသစ်သောလူတို့အဘို့အလွန်ကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အလုပ်အကိုင်ရှာကြသည်သောသူတို့အဘို့ နိုင်ငံတကာက။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တို့အဘို့အကြည့်များရှိနိုင်ပါသည် သငျသညျအလုပ်အကိုင်ရှာတှေ့နိုငျရှိရာထိပ်ပိုင်း rated အလုပ်က်ဘ်ဆိုက်များ.
ယခုကြှနျုပျတို့ WhatsApp ကိုအဖွဲ့များအပေါ်ငှားရမ်းနေကြ
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီယခု WhatsApp ကိုအုပ်စုများသို့ရွေ့လျားနေသည်။ သငျသညျယခုစုဆောင်းမှုအဘို့သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ အမှု၌သင်တို့ရှိပါက မိုဘိုင်းနံပါတ်များကိုပွား စုဆောင်းမှုသည်။ သငျသညျမိုဘိုငျးဖုနျး WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာစတင်သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကဒီမှာဖြစ်ကြောင်း WhatsApp ကိုကအလုပ်တစ်ခုရဖို့သင်ကူညီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဆိုပါအဘို့အသငျသညျနေရာဖြစ်ပါသည် စော်ဘွားအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်အကိုင်များ။ အလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေကျွန်ုပ်တို့၏်ထမ်းခေါ်ယူမှုကိုယ်စားလှယ်များ။ ရိုးရှင်းစွာအဖြစ်ဟု ယူအေအီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့စုဆောင်း.
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်သင်၏ဖုန်းနံပါတ်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်စကားပြော ဒူဘိုင်းအတွက် WhatsApp ကိုအုပျစုမြား။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အနေရာလွတ်ကိုရှာဖွေ စီးတီး။ ထိုအခါမှအလုပ်အကိုင်ကမ်းလှမ်းမှုများပေးပို့ခြင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေကိုယ်စားလှယ်လောင်း နှင့်အဖြစ် ရုရှားနိုင်ငံအနေဖြင့်ကျွမ်းကျင်သူများ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီကိုပင်ကျွန်ုပ်တို့၏ငှားရမ်းန်ဆောင်မှုများ၏မာနထောင်လွှားဖြစ်ပါသည် စပိန္ ဟိန်ဒီကျွမ်းကျင်သူများ။ ထိုမှတပါး, တူရကီအလုပ်ရှာဖွေသူများ, သီရိလင်္ကာကလူ အဘယ်သူသည်ဒူဘိုင်းတွင်အလုပ်လုပ်ချင်တယ်။ ငါတို့သည်ဖြစ်ကြ၏ ပင်ပေါ်တူဂီအလုပ်ရှာဖွေသူများကူညီပေးနေ နှင့် ပြင်သစ်ကျွမ်းကျင်သူများ။
အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူမှတ်ပုံတင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းမျှော်လင့်ချက်ရှိခြင်းနေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသင်းမျှော်လင့် သင်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုအတွက်အလုပ်အကိုင်အရကူညီပေးနေ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ, သငျသညျရှာတှေ့နိုငျ ဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းသူစုဆောင်းမှုအေဂျင်စီများ။ အလုပ်အကိုင်လျှောက်ထားဖို့ဘယ်လိုပေါ်ထို့အပြင်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကို။ သူတို့ရဲ့ profile ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဒူဘိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းစျေးကွက်အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ပါတယ် ဒူဘိုင်းအိပ်မက်အကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဒူဘိုင်းတွင်တိုက်ရိုက်အလုပ်ရှင်များနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြော။ အတူတူသင်သည်သင့်အေဂျင်စီများငှားရမ်းနှင့်အတူ ဒူဘိုင်းအတွက်ခရီးစဉ်ကိုငှားရမ်းကုမ္ပဏီများမှ။ ဒါကယူအေအီးအတွက်အလုပ်ရှင်များကရှာဖွေတာတစ်အတော်လေးလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်စမတ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်းကြည့်ရှိသင့် ဒူဘိုင်းအသစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အကွံဉာဏျမြား။ အခြိနျမှနျမှကြည့်ရှိသည်ဖို့ကျိုးနပ်သည်။ အဘယ်သူသည်ပစ္စုပ္ပန်အချိန်ကဒူဘိုင်းအတွက်ငှားရမ်းဖြစ်ပါတယ် ?. ဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အဘို့ငါတို့စာမျက်နှာသို့သွားရောက်ခြင်း 80k ဧည့်သည်တစ်ဦးတစ်လထက် ပို. ။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်များမှာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအမဲလိုက်အကြောင်းကိုအကွံဉာဏျတဖဲ့ရှာကြံ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ website တွင်, သငျသညျပင်မှာကြည့်နိုင်ပါတယ် ဘယ်လောက် Google ကဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူများအတွက်သတင်းအချက်အလက်အဖြစ်အများအပြားအပိုင်းပိုင်းများကိုရန်ဖြစ်ပါသည်။ ၏ရည်ရွယ်ချက် သငျသညျအလုပ်အကိုင်ကိုရှာဖွေကူညီပေးနေ ကောင်းသောကုမ္ပဏီများနှင့်။
နောက်ထပ်အမျိုးအစား အိန္ဒိယကျွမ်းကျင်သူများအဘို့န်ဆောင်မှု သူကိုနေရာချခံရဖို့မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ အတူထို့ပြင်ယေဘုယျအကူအညီနဲ့ တစ်ပါကစ္စတန်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေသူအဖြစ်အလုပ်ရှာဖွေတာ။ ဒူဘိုင်းမြို့စူပါအစာရှောင်ခြင်းကြီးထွားလာနေပါတယ်။ ဒါကမြို့ဖြစ်လာဖြစ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း၏ဗဟို အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ ကူညီခြင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူ ကျနော်တို့တတ်နိုင်သမျှအဖြစ်။ ကျနော်တို့အကြံပေးကြသည် အလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်အလုပ်အကိုင်ရှာတွေ့ဖို့ဘယ်လိုနီးပါးမည်သည့်လူအမျိုးမျိုး။ ဒူဘိုင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်တဖဲ့ပေး။ နေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုမီဒီယာလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်သတင်းနှင့်မွမ်းမံမှုများပေးကြသည်။ 2016 ကတည်းကကျွန်တော်ပင်ဖြစ်ကြောင်း ယူအေအီးအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့တောင်အာဖရိကကူညီပေးနေ.
အွန်လိုင်းဆောင်းပါးများကိုအားမရကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသင်သည်သင်၏အိပ်မက်အလုပ်အကိုင်ရောက်ရှိရန်ကူညီပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလျှင်အဘယ်သူမျှမကိစ္စ ဒူဘိုင်းတွင်ဆရာမအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေနေ။ သို့မဟုတ်ပင်များအတွက် ဒူဘိုင်းအတွက်ကားတစ်စီး-related အလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု။ ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ် tools များရှိခြင်းနေကြသည်။ အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အစာရှောင်ရရန်သင့်အားကူညီပေးနေသည်။
များစွာသောရွေးချယ်စရာဖို့ရှိပါတယ် ဒူဘိုင်းအတွက်အင်တာဗျူးရှာဖွေဖြတ်သန်း။ ဒီခေါင်းစဉ်ကိုမတစ်ခုတည်းအကွံဉာဏျရှိပါသည်။ အားလုံးကျနော်တို့ကယ့်ကိုဤခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်. သိနိုင်ပါသည်။ တကယ် Is ဒူဘိုင်း 2018 နှင့် 2019 အတွက်ဂျော့ဘ်များအတွက်ငှားရမ်းသူ။6အင်တာဗျူးကိန်းဂဏန်းများကြောင့် get ရန်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်စော်ဘွားအတွက်ပထမဦးဆုံးအလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ 10 နှစ်တက် 15 ထက်ပိုသည်။ ဤရွေ့ကား, may ပေမယ့် အကောင်းဆုံးကိုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်းစစ်မှန်တဲ့ဖြစ်။ ထိုအမြင့်မားခြင်းမှလတ်ဆတ်လာအလုပ်အကိုင်များကမ်းလှမ်းမှု paid ဒူဘိုင်းအတွက်ဘဏ္ဍာရေးနေရာလွတ်။ အဓိကအားဖြင့်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်အလုပ်အကိုင်များဤအမျိုးအစားများအတွက်အင်တာဗျူးပေး။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်တိုင်းအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမုဆိုး။ ကျိန်းသေသူတို့ရဲ့စဉ်းစားသင့် ကာတာနိုင်ငံအတွက် 2022 ကမ္ဘာ့ဖလားများအတွက်လျှောက်လွှာ။ ဒါ့အပြင်ယူအေအီးအတွက်အများကြီးပိုပြီးအလုပ်အကိုင်နေရာလွတ်ရှိကွောငျးကိုအောကျမေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ မြေတပြင်လုံးအရှေ့အလယ်ပိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ။ စီးပွားရေးဖွဲ့စည်းပုံမြင့်တက်နေသည်။ နယူးအဆောက်အဦး GCC နိုင်ငံများရှိတညျဆောကျနေကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အရပျ၌ပိုမိုမြင့်မားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစနစ်အားရှိစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည်တစ်ခုတည်းသောတိုင်းပြည်။ ဖြစ် ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်နေ့တိုင်းပြည်တော်ပြန်ငှားရမ်း။ တဖန်သင်တို့နေရာပြောင်းရွှေ့ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဒီတိုင်းပြည်မှာရှိသင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ် key ကိုအမှတ် အဘူဒါဘီအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေ။ ဥပမာအားဖြင့်, သငျသညျအဘူဒါဘီအတွက်နေရာလွတ်ကိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ပြီးတော့အခြားမြို့မှထွက်ပြောင်းရွှေ့ရလိမ့်မည်။
a ရရန်သင့်အားကူညီခြင်း အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
သင့်ရဲ့သုတေသနအတွက်သော့တစျခုဖွစျနိုငျ ယူအေအီးအတွက်အစိုးရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေတာ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၏ဤအမျိုးအစား။ ဒါဟာရေရှည်အမှုဆောင်အရာရှိများအတွက်အလွန်ကောင်းလှ၏။ အထူးသဖြင့် သငျသညျသငျနှငျ့အတူတစ်မိသားစုရှိခြင်းလျှင်။ အဆိုပါအနုတ်လက္ခဏာဘက်တွင်, ဒီအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအခွင့်အလမ်း။ အခန်းအလွတ်ဆုံးရှုံးဖို့မတတ်နိုင်သူကလူတို့အဘို့အများကြီးပိုပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ကဒါကိုကောင်းစွာပေးဆောင်ခြင်းမရှိပါ။ ကျနော်တို့ကတခြားလူသိများတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးမှနှိုင်းယှဉ်အထူးသဖြင့်အခါ။ သငျသညျချောင်မဟုတ်ဘတ်ဂျက်ပြုကြဖို့လုံလောက်တဲ့အစာရှောင်ထားရှိခံရဖို့ရှာဖွေနေမယ်ဆိုရင်မှတ်မိဖို့ပထမဦးဆုံးအရာ။ သငျသညျကိုသိရန်လိုအပ် ယူအေအီးအတွက်မန်နေဂျာငှားရမ်းဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဘယ်လို.
ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူတက်ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ချင်ပါတယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်ဒူဘိုင်းအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှာဖွေနေ။ သငျသညျစိတျထဲတှငျကြောင်းရှိရမည်။ သငျသညျအလည်အပတ်ဗီဇာအပေါ်စော်ဘွားအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အကြည့်နိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်သည်ရပါမည် အလုပ်အကိုင်အစတင်ရန် တစ်ဦးအလုပ်လုပ်ကိုင်ဗီဇာအတူ။ A ကောင်းဆုံး option ကိုအခြားလူများစကားပြောနိုင်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်ပြီးသားယူအေအီးအတွက်အလုပ်ကမ်းလှမ်းချက်ကိုတယ်သောသူတို့နှင့်အတူ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏သုံးနိုငျ အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာလမ်းညွှန် ရိုးရှင်းသောအကြံပေးချက်များသည်အုပ်စုတစ်စုနှင့်မေးပါ။ အဆိုပါ မိုဘိုင်းဖုန်းစုဆောင်းမှုစျေးကွက် သိသိသာသာရှေ့သို့ရွေ့လျား။ ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းကပိုကလူကို PC တစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်မိုဘိုင်းဖုန်းကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၌အကြှနျုပျတို့၏ဆောင်းပါးများမကြိုက်ကျေးဇူးပြုပြီးနှင့် ဒူဘိုင်းမြို့အကြောင်းကိုသတင်း။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့ထိုသူတို့အားမရနေကြသည်။ စော်ဘွားအတွက်ဘာလုပ်ရမှန်းအကြံပေးချင်ပါတယ်ဖို့ကြိုးစားနေ။ နှင့်ယူအေအီးအဘယ်သို့ပြုကြပါဘူး။ နေ့စဉ်မိနစ်မျှော်လင့်စာရေးဆရာများ၏ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏နှိမ့်ချအဖွဲ့သည်။ မင်းဘဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးဝေမျှ အခြားသူတွေ LinkedIn ပေါ်တွင်သို့မဟုတ်အတွက်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိကူညီနိုင်ရန် Naurki ပင်လယ်ကွေ့အလုပ် site ကို.
ဤအချက်များပေးထား, အခြားသူများကိုကူညီကျေးဇူးပြုပြီး ရှာဖွေစုဆောင်းနှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့အပေါ် LinkedIn တို့ သူကိုအခွင့်အလမ်းရှိစေခြင်းငှါ,
ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်ရှာဖွေသူများ
အဆိုအရ အစိုးရအလုပ်အကိုင်များစာရင်းဇယား ပစ္စုပ္ပန်အချိန်အထိ, ဒူဘိုင်းမြို့တော်သစ်တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း start ဖို့အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်သင်သည်အလုပ်အကိုင်များရှိနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစကားပြောကြောင့် 100% စိတ်ကျေနပ်မှုအာမခံချက်ဖြစ်ပါတယ်နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲပေးထားပါတယ်။ ဒီလက်ငင်းမှာကျွန်တော်တစ်ဦးကိုကမ်းလှမ်း 100% အလုပ်အကိုင်အခွင့်အမှတ်ပုံတင်ရေးပြီးနောက်အာမခံချက်ပူဇော်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအံ့သြဖွယ်သောကွောငျ့ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းသင်တစ်ဦးအလုပ်ရ။ သငျသညျလိုအပျကွောငျးအများစုကဆွဲဆောင်မှုသက်သေအထောက်အထားမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတစ်ခုလျှောက်လွှာပေးပို့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခါမရ စော်ဘွားအတွက်အလုပ်တစ်ခုရှာတွေ့မှအခွင့်အလမ်း။ ယေဘုယျအားဖြင့်စာမျက်နှာအဆုံးမှာပေးညွှန်ကြားချက်အတိုင်းလိုက်နာပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်နှင့်နောက်ဆုံးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ဆေးနေ၏ရည်ရွယ်ချက် GCC များအတွက် WhatsApp ကိုအဖွဲ့များ။ ကျွန်တော် Google က Facebook နှင့် LinkedIn ပေါ်တွင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှအစေခံမည်မျှဖောက်သည်တစ်ဦးကြည့်ရှိသည်။
ဤအချက်များပေးထား LinkedIn ကိုလိုကျနာပါ။ ပင် ဒူဘိုင်းအကြောင်းပိုမိုထွက်ရှာတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ဟာလူမှုမီဒီယာအပေါ် 30,000 နောက်လိုက်ကျော်ရှိသည်ဘယ်မှာ။ စိတ်ထဲ၌ဤအတူ, သငျသညျခကျြခငျြးဒူဘိုင်းစီးတီးအတွက်အလုပ်အကိုင်အရှိနိုင်ပါသည်။ ပစ္စုပ္ပန်အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီများကထောက်ပံ့ပေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့်စုဆောင်းမှုအကူအညီနဲ့အတော်လေးထိုနည်းတူပါပဲ။ တကယ်တော့တစ်ဦးကိစ္စအဖြစ်ကျနော်တို့ထိပ်တန်းအလုပ်နေရာလွတ် Finder အံ့သြဖွယ် rated နေကြတယ် အိန္ဒိယကနေနိုင်ငံတကာအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့အလုပ်အကိုင်အကူအညီနဲ့ အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ, တကယ်တော့, linkedin အပေါ်ဦးဆောင်စုဆောင်းမှုကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သို့သော်အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့ထောက်ပံ့ပေးသူတစ်ဦးတည်းသာမဟုတ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှာဖွေနေသူများအတွက်အလုပ်အကိုင်အသတင်း.
ဒီအတွက်ကြောင့်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုကိုလိုက်နာ Facebook ပေါ်မှာကုမ္ပဏီ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ဟော ပြော. အကျနော်တို့ 50,358 ကျော် likes ပါပြီ။ ထိုသို့ 25,680 လူမှုမီဒီယာအနှစ်ချုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းပြောနေတာ, အထက်ပြ။ ဒူဘိုင်းမြို့ကုမ္ပဏီ - ကျနော်တို့သင်ကူညီကြလိမ့်မည် အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုစျေးကွက်.
အမှုဆောင်ခြင်း အဆိုပါ: ကျွန်တော်တို့ကိုဝတ်ပြုသူတွေက ၏ယဉ်ကျေးမှု ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ, ယူအေအီးနှင့်ဗြိတိန်တွင်ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့တို့ကမောင်းနှင်
အခြားတစ်ဖက်တွင်, 2018-2019 အတွက်ဒူဘိုင်းစီးတီး်ထမ်းခေါ်ယူမှု။ အောင်မြင်မှုရဲ့အဖြစ်မှန် key မှာပါ!
သင်ကရှာတွေ့စေချင်ပါနဲ့ ဒူဘိုင်းယောဘ ?. ကျွန်တော်တို့ရဲ့သွားရောက်ကြည့်ရှုကျေးဇူးပြုပြီး WhatsApp ကို Group မှအလုပ်ရှာဖွေသူများအဘို့။ သင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ post CV ကိုမန်နေဂျာငှားရမ်းဖို့ထည့်ပါ။
သင်တစ်ဦးဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်လာသောအခါအဘယ်သူသည်သိတယ် ပျော်ရွှင်ထားရှိလူတစ်ဦး အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု၌တည်၏။